Nagu saabsan - Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd.
Soojiidashowaa shirkad leh R & D madax-bannaan oo dhammaystiran iyo wax-soo-saar wax soo saar leh.Waxyaabaha ay ka kooban yihiin nadiifinta afka, duugista jirka, soo celinta dhaqdhaqaaqa iyo alaabada kale ee elektarooniga ah Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo hibooyin soo koraya leh khibrad horumarineed oo hodan ah iyo karti abuurnimo horumarsan, adeegsanayna teknoolojiyadda AI oo aan ka caawinnay maal-gashiga ballaaran ee lagu soo saaray alaabooyin taxane ah oo taxane ah oo leh ilaalin buuxda ee patent sannadihii la soo dhaafay.
Charmhome waa la ansixiyay shahaadooyinka, sida ISO9001, CE, RoHS, FDA, FCC. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa Khadad wax soo saar oo casri ah oo loogu talagalay alaabada elektaroonigga ah ee Shiinaha. Waxaan marwalba u hogaansanahay fikradda maaraynta ee ku wajahan dadka, cilmiga iyo saxda ah, tayada marka hore. Anaga ahaan, dareenka cajiibka ah iyo qiimeynta qiimaha ku kordhay ee macaamiisha ayaa ah baacsigayaga dhaqanka tayada leh.
Maaddaama ay tahay shirkad ballaadhinaysa, Charmhome waxay horumarinaysaa astaan ​​u gaar ah, sidoo kale waxay soo dhaweyneysaa iskaashiga mashruuca OEM & ODM. Waxaan raaceynaa fikradda ah u adeegida macaamiisha si toos ah, waxaan u dhoofinay wax soo saarkeena dalal badan iyada oo loo marayo Alibaba, Amazon, Lazada iwm.
Kooxda Charmhome waxay u hoggaansami doontaa mabda'a wadashaqeynta daacadnimada ah oo horay u sii socotaa, isku day sida ugu fiican si ay alaabtu u noqdaan baahi maalinle ah oo loogu talagalay dadka caadiga ah Ku soo dhawow shirkaddayada oo raadso iskaashi guul-guul ah.